Fifamoivoizana aotoboky ny mpandeha mihombo: Ny seranam-piaramanidina San Jose dia manampy toerana fitobiana 900
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fifamoivoizana aotoboky ny mpandeha mihombo: Ny seranam-piaramanidina San Jose dia manampy toerana fitobiana 900
Manampy toerana fijanonana 900 ny seranam-piaramanidina San Jose
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mineta San Jose (SJC) dia nankatoavin'ny filankevitry ny tanànan'i San Jose hanitatra ny fotodrafitrasa fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Io fankatoavana io dia ahafahan'ny SJC manampy toerana farafahakeliny 900 ho an'ny Toekarena Lot 1, fantatra ihany koa amin'ny hoe «fiara maharitra», miorina amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Airport. Miaraka amin'ny isan'ny mpandeha mamakivaky ny SJC isan'andro, dia mitentina be ny fijanonana rehefa mitohy mameno tsy tapaka ny toerana. Tamin'ity taona ity, ny Economy Lot 1 dia nahatratra 100 isan-jato ny fahaiza-manao 36 heny tao anatin'ny telo volana, ao anatin'izany ny fanidiana ny toeram-piantsonana rehetra mandritra ny adiny fito misesy mandritra ny faran'ny herinandro Columbus Day.
“Ny laharam-pahamehanay dia ny fahamoram-bidy sy ny fahafaha-mandeha ho an'ireo mpandeha eto amintsika. Ny fanampiana ny parking ho an'ny besinimaro kokoa amin'ny lisitra ataon'ny SJC dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny fitomboan'ny tinady amin'ny fijanonana eo an-toerana raha toa ka manamora kokoa ny fandehanan'ny mpandeha amin'ny sidina ara-potoana, "hoy ny Tale Jeneralin'ny SJC Judy Ross.
SJC dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina mitombo haingana indrindra any Etazonia tao anatin'ny efa-taona lasa. Ny seranam-piaramanidina dia niaina fitomboan'ny mpandeha 15 isan-jato isan-taona isan-taona nandritra ny 12 volana nifarana tamin'ny 30 septambra 2019.
Ankoatr'izay, ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha dia vinavinaina hanohy hamaky firaketana, miaraka amin'ireo mpandeha mihoatra ny 15 tapitrisa tratry ny faran'ny taona, raha ampitahaina amin'ny mpandeha 14.3 tapitrisa nanompo tamin'ny taona kalandrie 2018. Ity zava-bita ity dia vokatry ny fitomboan'ny zotram-piaramanidina, sidina ary toerana tsy nijanona tao valin'ny fitakian'ny mpivahiny Silicon Valley.
Hensel Phelps dia nahazo ny fifanarahana tsy maintsy hihoarana $ 30 tapitrisa hananganana garazy misy rihana maro amin'ny Economy Lot 1, izay be velarana ankehitriny. Hanomboka ny fanamboarana aorian'ny fizotran'ny fialantsasatra Thanksgiving amin'ity taona ity ary tombanana ho vita amin'ny voalohan'ny 2021.
Toerana 770 eo amin'ny Toekarena Lot 1 no ho voakasik'izany ary tsy ho afaka hipetraka mandritra ny fanamboarana. Ho fanonerana io fahaverezan'ny fijanonana tsy maharitra io, ny seranam-piaramanidina dia hanome toerana fijanonana 900 fanampiny ao amin'ny Lot 2 / Terminal A Garage manomboka ny 20 Novambra 2019. Hatao izany amin'ny alàlan'ny famindrana ireo mpiasan'ny mpiara-miasa SJC mankany amin'ny toeram-piantsonanan'ny seranam-piaramanidina. Ity dia ohatra iray hafa amin'ny fifantohan'ny seranam-piaramanidina amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpandeha sy ny fahafaha-mahazo azy ireo amin'ny ankapobeny.
Satria manakaiky ny vanim-potoana fitsangatsanganana be atao indrindra amin'ny taona, anisan'izany ny faran'ny herinandro Veterans, angatahina ireo mpizaha tany mba hanana drafitra fijanonana alohan'ny hahatongavany any SJC. Ireo toeram-piantsonan'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina dia mety hahatratra ny fahaiza-manao mihoatra ny fetin'ny Veterans weekend sy mandritra ny fialantsasatra Thanksgiving.
Seoul: Korea avaratra dia tsy hiresaka momba ny fandravana ireo hotely Koreana Tatsimo 'malefaka'
Mandrahona ny hidina anaty fiaramanidina A320neo an'ny Indiana ny mpandrindra ny fiarovana ny sidina